ကလေးတက်ဘလက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 2022 - လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံ
ကလေး တက်ဘလက် သုံးသပ်ချက်များ
Fire HD ပါ
အသက် 1 နှစ်အရွယ် ကလေးအတွက် လက်ဆောင်
ကလေးများအတွက် iPad များ
Kids Tablet ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးတက်ဘလက် 2022
အားကိုးရတဲ့သူကို ရှာနေတာ တက်ဘလက်လေးတွေ စမ်းသပ်ပါ။ ပွင့်လင်းမြင်သာသောနည်းစနစ်ဖြင့်? ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ အကောင်းဆုံး ကလေးတက်ဘလက် 2022 ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။.
Apple မှ တက်ဘလက်များ
Amazon မှ တက်ဘလက်များ
ဧပြီလ 29 ရက်၊ 2022 တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။
အားကိုးရတဲ့သူကို ရှာနေတာ တက်ဘလက်လေးတွေ စမ်းသပ်ပါ။ ပွင့်လင်းမြင်သာသောနည်းစနစ်ဖြင့်? ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ အကောင်းဆုံး ကလေးတက်ဘလက် 2022 ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။. ကလေးတက်ဘလက်တစ်လုံးဝယ်ခြင်းသည် ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် စျေးနှုန်း-စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိမော်ဒယ်များရှိသည်။ ကလေးဆန်ဆန် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။. အခုပဲ ဆက်ဖတ်ပြီး သုံးစွဲတဲ့ငွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။ အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ သင်နှင့် သင့်ကလေးအတွက်။ မတူညီသော တက်ဘလက်များ၏ သုံးသပ်ချက်များကို ဖတ်ရှုပြီး သင့်ကလေးအတွက် မည်သည့်အရာသည် ပြီးပြည့်စုံမည်ကို ရှာဖွေရန် ယခု ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
စာမေးပွဲအောင်သူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အသစ်ဝယ်သောအခါ၊ ကလေးတက်ဘလက်များသည် တတ်နိုင်သမျှ အင်္ဂါရပ်များ ရှိသင့်သော်လည်း မိဘများအတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
1. Blackview Tab6Kids ကလေးတက်ဘလက်
ပွောငျးလှဲ: သုံးနှစ်မှ ရှစ်နှစ်
ကလေးသော့ပိတ်ရန်- မိဘထိန်းချုပ်မှုအတွက် iKids ဧရိယာ၊ အက်ပ်ရေခဲသေတ္တာ၊ စကားဝှက်ကာကွယ်မှု၊ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အပလီကေးရှင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသုံးပြုမှုစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဝဘ်ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု
အာမခံချက်:2နှစ် (ထုတ်လုပ်သူ၏အဆိုအရ- ချို့ယွင်းချက်ရှိပါက၊ ၎င်းကို ထုတ်လုပ်သူထံ ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ပြီး အစားထိုးတက်ဘလက်ကို ပို့ဆောင်ပေးမည်)
ကျန်းမာခြင်း- Low Blue Light Technology၊ Dark Mode၊ Case သည် အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး အနံ့အသက်ကင်းသည်။
သိုလှောင်နိုင်စွမ်း- 32GB (256GB ထပ်တိုးနိုင်သည်)
ကင်မရာ: နောက်၊ ရှေ့
ကင်မရာ ရုပ်ထွက်- 2MP + 5MP ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား X ကိုက x 20.8 12.4 0.9 စင်တီမီတာ
ဘက်ထရီ လိုအပ်သော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ ၁ လုံး (ပါဝင်သည်)။
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 8 လက်မ၊ 1280*800 မြင့်မားသော IPS ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
ပရိုဆက်ဆာ: 2,0 GHz (12 nm quad-core Unisoc-T310)
Processor cores များ: 8
ကျပန်း access ကိုမှတ်ဉာဏ်RAM: 3GB
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား- ‎5G WIFI၊ 4G LE၊ ဘလူးတုသ်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် ‎Android 11 နှင့် Doke OS_P 2.0
ဘက်ထရီသက်တမ်း: 9.9 ဝပ်နာရီ
ပစ္စည်းအလေးချိန် ၆၅ ဂရမ်
ချိတ်ဆက်မှုများ USBC အပေါက်၊ MicroSD အပေါက်၊ 3,5mm နားကြပ်ပေါက်
ဆင်းမ်ကတ်- Dual SIM (2*Nano SIM သို့မဟုတ် 1*Nano SIM + 1*microSD)
Specials: မျက်နှာပြင်နှစ်ခု ဖျော်ဖြေရေးမုဒ်၊ Dual 4G LTE- ဖုန်းကတ်နှစ်ခုကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ Face ID လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း၊ သားရေအိတ်
2. 🥈 Fire HD 10 Kids တက်ဘလက်
လည်ပတ်မှုစနစ်- Fire OS
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား- ၃.၅ အတွင်း
အာမခံချက်:2နှစ်
မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်- 1080pixels
မှတ်ဥာဏ် 32 GB
အရောင်များ: ကောင်းကင်ပြာ၊ aquamarine သို့မဟုတ် လာဗင်ဒါ အိတ်
ကလေးသော့ပိတ်ရန် အသက်အရွယ် စစ်ထုတ်မှုများ၊ သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင့် အချိန်ကန့်သတ်ချက်များ
အသက်အရွယ် ညှိနှိုင်းမှု: မွေးသက္ကရာဇ်ကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်
Google Play Store ဖြစ်နိုင်သည်။
Octa Core ပရိုဆက်ဆာ
3 GB ကို RAM ကို
ဘက်ထရီသက်တမ်း: 12 နာရီအထိ
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: အန်းဒရွိုက် 10
မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်- 1920 x ကို 1200 Pixel
8 လက်မ HD မျက်နှာပြင်
သိုလှောင်မှု 32GB (128GB အထိ ထပ်တိုးနိုင်သည်)
Processor ကိုRAM: 2GB
အရောင်များ: အရောင်နှစ်မျိုး; အပြာနှင့် ပန်းရောင်
Playstore- Google Play Store ဖြစ်နိုင်သည်။
လုံခွုံရေး: AEEZO အခမဲ့ မိဘထိန်းချုပ်ရေးအက်ပ်: ကလေးများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး လတ်တလော လှုပ်ရှားမှုများ + ကြိမ်နှုန်းနှင့် အသုံးပြုမှု ကြာချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။
ဘက်ထရီသက်တမ်း: 9.25 နာရီ
ရှုထောင့်: ၉.၄ x ၆.၂ x ၅.၈ စင်တီမီတာ၊ 21 ဂရမ်
အာမခံချက်: တစ်နှစ်ပြန်အမ်းငွေ ဝန်ဆောင်မှု။
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Fire OS ပါ
2 နှစ်ပေါင်းအာမခံ: စက်ကို အခမဲ့ အစားထိုးပါမည်။
0% ဘဏ္ဍာငွေ€45,00 x3လစဉ်အရစ်ကျ
8 လက်မ HD မျက်နှာပြင် ပြတ်သားသောရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်
အမေဇုံကလေးများ +: ကြော်ငြာမပါသော မီဒီယာစာကြည့်တိုက်
WiFi တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။: အကန့်အသတ်မရှိအင်တာနက်
32 GB မမ်မိုရီတို့နဲ့ပါ။ microSD အပေါက်: အထိ 1 တီဘီ ချဲ့နိုင်သည်
ကလေးများအတွက် အသုံးပြုချိန်ကို တတ်နိုင်သမျှ သတ်မှတ်ပေးခြင်း
5. HAPPYBE Kids တက်ဘလက်
ကလေးသော့ပိတ်ရန်− စကားဝှက်ကာကွယ်မှုစနစ်၊ မျက်နှာပြင်အချိန်ဆက်တင်၊ လုံခြုံရေးမုဒ်များနှင့် ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်း အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှု။
ကျန်းမာခြင်း: Low Blue Light နည်းပညာ
သိုလှောင်နိုင်စွမ်း: 32 GB (အမြင့်ဆုံး 128 GB အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်)
ကျပန်း access ကိုမှတ်ဉာဏ်RAM: 2GB
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား X ကိုက x 21 12.4 1 စင်တီမီတာ
Farben: အပြာ၊ ပန်းရောင်
display: ၈ လက်မ၊ 8x1920 ပစ်ဇယ်
ပရိုဆက်ဆာ: 1,6 GHz quad core ပရိုဆက်ဆာ
Processor cores များ: ၄
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် ‎Android 9.0 – 10 (သတ်မှတ်ချက်များ ကွဲပြားသည်)
စုပုံခြင်းဘက်ထရီ: 5000mAh လီသီယမ်ပိုလီမာ
ဘက်ထရီသက်တမ်း: ‎4.9 ဝပ်နာရီ
ပစ္စည်းအလေးချိန် : 863 ဂရမ်
ချိတ်ဆက်မှုများ USB Type-C၊ MicroSD အပေါက်၊ နားကြပ်ပေါက်
Specials- ကလေးများနှင့် စကားပြောခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကို ခွင့်ပြုသည့် "မိသားစုအဖွဲ့" အက်ပ်
Contra: 5V 2A အားသွင်းကိရိယာကို သီးခြားဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်။
6. ANYWAY.GO ‎KT1006 Kids တက်ဘလက်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား X ကိုက x 24.4 20.2 3.4 စင်တီမီတာ
display: ၈ လက်မ၊ 8x1280 ပစ်ဇယ်
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား- ဘလူးတုသ်၊ ဝိုင်ဖိုင်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် Android 10
စုပုံခြင်းဘက်ထရီ: 6000mAh လီသီယမ်ပိုလီမာ
ဘက်ထရီသက်တမ်း‎ ‎၉.၂၅ ဝပ်နာရီ
7. Pebble Gear Kids တက်ဘလက် ၇
မာ့ခ်: Pebble ဂီယာ
ကလေးသော့ပိတ်ရန်− မိဘများသည် မိဘအကောင့်တွင် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းအချိန်၊ ဂိမ်းကြာချိန်နှင့် အက်ပ်ဝင်ရောက်ခွင့်တို့ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ကျန်းမာခြင်း: အပြာရောင်အလင်းစစ်ထုတ်စက်၊ ကိုယ်ပိုင်အက်ပ်စတိုးမှဂိမ်းများသည် ကြော်ငြာလုံးဝမပါဘဲဖြစ်သည်။
သိုလှောင်နိုင်စွမ်း: 16 GB (ကနဦးထည့်သွင်းပြီးနောက် 12 GB ဝန်းကျင်ရရှိနိုင်ပါသေးသည်)
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 25x18x2cm; 780 ဂရမ် (Frozen) 7.7 x 17.5 x 24.1 cm (Cars)၊
Farben- အပြာနုရောင် (အေးစက်နေသော)၊ မုန်ညင်းဝါ (Toystory)၊ အချက်ပြအနီရောင် (ကားများ)၊ Turquoise Blue (Mickey Mouse Bundle + နားကြပ်များ)
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား7Zoll
ပရိုဆက်ဆာ: Quad-core 1,3 GHz CPU ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် ‎Android 8.1 Oreo / သို့မဟုတ် Android 8.1 Go (Mickey Mouse နှင့် Cars ဗားရှင်း)
ပစ္စည်းအလေးချိန် : 780 ဂရမ် (Frozen), 485 ဂရမ် (Mickey Mouse)၊
ချိတ်ဆက်မှုများ Micro USB ပေါက်၊ MicroSD အပေါက်
Playstore- မဖြစ်နိုင်ပါ (Youtube နှင့် Youtube Kids ကို Safe-Brower နှင့် whitelisting ဖြင့်သာ သုံးနိုင်သည်)
Specials- 'GameStore Junior App Store' သို့ 500 လ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော ဂိမ်းနှင့် အက်ပ် 12 ကျော်။ (ထို့နောက် တစ်နှစ်အတွက် ယူရို ၃၉.၉၉။)
89,90 မှ 124,99 EUR
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား ‎19 x 12 x 1 စင်တီမီတာ; 350 ဂရမ်
Processor cores များ ၁
RAM အရွယ်အစား2GB ပါ
သိုလှောင်မှုအနုပညာ DDR3 SDRAM
ဝဘ်ကင်မရာ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 2MP
ဘက်ထရီ ပါဝင်သည် ဟုတ်ကဲ့
ဘက်ထရီသက်တမ်း: 11.1 ဝပ်နာရီ
ပစ္စည်းအလေးချိန် : 350 ဂရမ်
EUR 98,99 မှ
လည်ပတ်မှုစနစ်- Android 10
7 လက်မ HD မျက်နှာပြင်
အရောင်များ: အပြာနဲ့ ပန်းရောင်ဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
AEEZO အခမဲ့ မိဘထိန်းချုပ်ရေးအက်ပ်: ကလေးများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး လတ်တလော လှုပ်ရှားမှုများ + ကြိမ်နှုန်းနှင့် အသုံးပြုမှု ကြာချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။
EUR 85,83 မှ
ကျွန်ုပ်တို့သည် 23 ရက်တာကာလအတွင်း စမ်းသပ်မှုတွင် မတူညီသော ကလေးများ၏ တက်ဘလက် ၂၃ လုံးကို အသုံးပြုပြီး စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကလေးများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တက်ဘလက် စုစုပေါင်း5မှ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်မှုတွင် 20 ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ စက်ပေါ်ရှိ လုံခြုံရေး၊ ကလေးများအတွက် အသုံးပြုသည့် လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ကိုင်တွယ်ရာတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အကဲဖြတ်မှုအတွက် အဓိက စံသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်ကို ကလေးများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ထိတွေ့အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ မော်တာကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးသော လမ်းကြောင်းပြခြင်းနှင့် မီနူးများနှင့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ပါသည်။ ဒါတွေကို ကလေးတွေ အလွယ်တကူ ရနိုင်ရမယ်။
နည်းပညာပိုင်းပါရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့တွင် မျက်နှာပြင်၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ တောက်ပမှုနှင့် အလင်းပြန်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ မန်မိုရီပမာဏ၊ ကင်မရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် ပရိုဆက်ဆာ၏ အမြန်နှုန်းတို့လည်းဖြစ်သည်။
တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူများအတွက် လုံခြုံရေးဆက်တင်များနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်မှု။ အသုံးပြုချိန်ကို ကန့်သတ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိရပါမည်။ ကလေးစားသုံးနိုင်သော အကြောင်းအရာကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ရန်နှင့် ကလေး၏လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေရန် မိဘများ လိုအပ်ပါသည်။ မိဘအက်ပ်တစ်ခုသည် အပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တည်ငြိမ်ခြင်း. ဘူး၏ အမျိုးအစားနှင့် အတိုင်းအတာသည် အနည်းဆုံး3မီတာ ပြုတ်ကျခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ပစ္စည်းမှ မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့များ မထွက်သင့်ပါ။
ကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤခြုံငုံသုံးသပ်ချက်မှ လျှို့ဝှက်ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းမှုထောင်ချောက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများကို လုံး၀ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။
အသေးစိတ်ရလဒ်- Amazon Fire 8HD တက်ဘလက်
Fire 8 HD Tablet Kids Edition တွင် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး တည်ငြိမ်သော ပလပ်စတစ်ဘောင်ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် တက်ဘလက်ကို ပျက်စီးစေမည့် အန္တရာယ်ကို စမ်းသပ်လိုသော ကလေးများနှင့် မူကြိုကလေးများသည် ဤအရာက အတော်လေး ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆန်းစစ်ထားသော အသုံးပြုသူဒေတာသည် ကလေးများ၏ အနိုင်ကျင့်ခံရသောအခါ ဖရိန်နှင့် စခရင်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် ဤတက်ဘလက်သည် ငယ်ရွယ်သော ကလေးများအတွက်ပင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခိုင်မာသော အဖော်ဖြစ်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။
တက်ဘလက်သည် ပေါ့ပါးပြီး တာရှည်ခံကာ ဘက်ထရီကြာရှည်ခံသောကြောင့် ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ဂိမ်းများသာမကဘဲ ရုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် တီဗီရှိုးများကြည့်ရန်၊ စာအုပ်ဖတ်ရန်၊ ပညာရေးအက်ပ်များကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် အိမ်စာလုပ်ရန်ပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ မိဘအထိန်းအချုပ်များဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် အွန်လိုင်းတွင်တွေ့မြင်ရသည့်အရာများကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် မသင့်လျော်သောအရာများနှင့် မထိတွေ့မိစေရန်။
✔️ နှစ်နှစ် စိတ်ပူစရာမလိုသော အာမခံချက်- ဤကာလအတွင်း ပျက်သွားပါက စက်ကို အစားထိုးပါမည်။
✔️ မိဘထိန်းချုပ်မှု- အသက်အရွယ်နှင့် အသုံးပြုသူစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများအပေါ်အခြေခံ၍ လုံခြုံရေးအဆင့်ကို ချိန်ညှိရန် အပြည့်အဝချိန်ညှိနိုင်သည်။
✔️0ယူရိုဖြင့် လစဉ်သုံးအရစ်ကျဖြင့် 45 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည်။
✔️ Full HD ရုပ်ထွက်နှင့် ရှစ်လက်မ မျက်နှာပြင်
✔️ AmazonKids+ စာရင်းသွင်းမှုဖြင့် ကြော်ငြာမပါဘဲ ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာစာကြည့်တိုက်
❌ စက်ပစ္စည်းသည် Android အစား Fire OS (Amazon ၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုစနစ်) ကိုအသုံးပြုသောကြောင့် Google Play Store မဖြစ်နိုင်ပါ။ (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Netflix ထည့်သွင်းနည်းလမ်းညွှန်)
❌ Display က တော်တော်မိုက်တယ်။
❌ LTE သည် သွားရင်းလာရင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကလေးတက်ဘလက် ပါဝင်ပါတယ်။ အသစ်ဝယ်တယ်။ စျေးကွက်တွင် လူကြီးများအတွက် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ယူဆောင်လာသည့် အင်္ဂါရပ်အားလုံးနီးပါး။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့နှင့်အတူ တက်ဘလက်များကို ကြီးထွားခွင့်ပေးရန် ရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ်ထားပြီး ကလေးများသည် ၎င်းတို့ကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ရှိသေးသည်။ မိဘများ ခွင့်ပြုပါ။ ကလေးများ၏ စခရင်အချိန်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ပါ။ စောင့်ကြည့်ပါ။ ဒါမှ တက်ဘလက်ကို ပိုမြင့်တဲ့ အရွယ်နဲ့ ရလာမှာပါ။ ကျောင်းဆက်တက် အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများအတွက် သင့်လျော်သော တက်ဘလက်ပုံစံများ. အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ခေတ်မီကလေးများ တက်ဘလက်များသည် ယင်းကို တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ကလေး - ဖော်ရွေ ကလေးများကို ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုခွင့်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကလေးများကို ပေးဆောင်ရန် အတူကြီးထွားဖို့. ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်မဆို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် တက်ဘလက်များသည် ခရီးရှည်သွားနိုင်သည်။ သက်တမ်း အောင်မြင်ရန်။ အဲဒါလည်း တစ်ခုရှိတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်ဝယ်တဲ့အခါ ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ မိဘအတော်များများလည်း အံ့သြနေကြသည် ကလေးတက်ဘလက်သည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ သည်နှင့်လုံးဝ ပညာရေးတန်ဖိုးကြီးသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်မှုတွင် အောက်ပါအချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။
ခေတ်မီတက်ဘလက်များတွင် မိဘများသည် ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုနေစဉ်တွင် ကလေးများအား ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်နှင့် ကလေးများအား ကစားခြင်းနှင့် သင်ယူမှုနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပေါင်းစပ်နိုင်စေမည့် အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ ကလေးတက်ဘလက် 2021 တွင် ပါဝင်သင့်သော အင်္ဂါရပ်များ နေသော
ကလေးများ၏အသုံးပြုချိန်ကိုကန့်သတ်ရန် timer တစ်ခု (ခေါင်းစဉ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်- ကလေးများအတွက် screen time မည်မျှကောင်းသနည်း။ / ကလေးများ၏ မျက်နှာပြင်အချိန်ကို ပိတ်ထားပါ။)
ကင်မရာ၊ ရှေ့ကင်မရာနှင့် အနောက်ကင်မရာတို့ကဲ့သို့ အင်္ဂါရပ်များ
Micro-SD ကဒ်အထိုင် သိုလှောင်မှုတိုးချဲ့ရန်
ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှ တည်ငြိမ်သောအကာအကွယ်အကာအရံများ (အကြောင်းအရာအတွက် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ- နို့စို့အရွယ်တွင် ရန်လိုမှု)
နားကြပ်အထွက်၊ မိုက်ခရိုဖုန်းထည့်သွင်းမှုနှင့် စားပွဲအထိုင်
ကလေးတက်ဘလက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ - ကလေးများအတွက် ဘယ်တက်ဘလက်က အကောင်းဆုံးလဲ။
ကလေးများအတွက် တက်ဘလက်တစ်ခုအနေဖြင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံပါသည်။ Fire 8 HD Tablet Kids Edition အဓိကအကြောင်းအရင်း- ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်။ Amazon မှတဆင့် နှစ်နှစ်အာမခံ. ဒီတော့ စက်ပျက်သွားတယ်။၊ သင်ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ လဲလှယ် - နှစ်နှစ်။ ထို့အပြင်, ထိုသို့ features တွေ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော တက်ဘလက်တစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ကြီးထွားနိုင်သည်။ ဟိ အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ် နှင့် အကြောင်းအရာသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ၎င်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ ကလေးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။, အဆိုပါ တက်ဘလက် အနည်းဆုံးတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ ကျောင်းနေအရွယ် အသုံးပြုပါ။ ဒုတိယနေရာမှာတော့ Vankyo S8 ကလေးတက်ဘလက်က ဖြစ်ပါတယ်။. ၎င်းသည် အတူရှိသည်။ 60 GB ကို အကြီးမားဆုံး သိုလှောင်နေရာမိဘမုဒ်အပြင်၊ မျက်စိတွင် လွယ်ကူသောမုဒ်လည်း ပါရှိသည်။ ရှေ့ နှင့် အနောက် ကင်မရာ ပါရှိပြီး ရုပ်ထွက် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး Google Playstore ချစ်သူများအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော တက်ဘလက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြင့် Vankyo S8 ကို ကျောင်းနေအရွယ်အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။
တက်ဘလက်များသည် သင့်ကလေးများကို ဖျော်ဖြေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Kids Tablet Test သည် သင်နှင့် သင့်မိသားစုအတွက် သင့်လျော်သော တက်ဘလက်ကို ရှာဖွေရန် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထိပ်တန်းတက်ဘလက်များအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများရှိသောကြောင့် မည်သည့်တက်ဘလက်သည် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကို အသိဉာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ တက်ဘလက်တစ်ခုစီတွင် မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်၊ ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှနှင့် ဝယ်ယူမှုမပြုလုပ်မီ ၎င်းသည် မည်သည့်အသက်အုပ်စုအတွက် သင့်လျော်သည်ကို သင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်စိတ်ကူး။ သင့်ကလေးများကို သူတို့နှစ်သက်မည့် အရာတစ်ခု လက်ဆောင်ပေးကာ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့် ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင် နည်းပညာအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်စေရန်လည်း ကူညီပေးပါမည်။ ထို့အပြင်၊ တက်ဘလက်အများစုတွင် ကလေးများကို ဖျော်ဖြေနေစဉ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို သင်ယူနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာအက်ပ်များပါရှိသည်။
ကလေးတွေက အမြဲတမ်း ခရီးသွားနေပြီး သူတို့ကို ဖျော်ဖြေဖို့ တစ်ခုခုလိုတယ်။
တက်ဘလက်များသည် စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ ကျောင်းစာများကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကလေးများအတွက် နည်းပညာအကြောင်း လေ့လာရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးသည် ၎င်းတို့၏တက်ဘလက်ပေါ်တွင် ဂိမ်းကစားခြင်းကို နှစ်သက်ပါက၊ ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများစွာလည်းရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ဒါကြောင့် ကြာကြာမစောင့်ပါနဲ့ - သင့်ကလေးကို ဒီနေ့ တက်ဘလက်တစ်ခု ယူလိုက်ပါ။
တွစ်တာ Instagram ကို အလယ်အလတ်
© 2022 ကလေးတက်ဘလက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။